Tafiditra ao anatin’izany ilay tetikasa lalankely izay vatsian’ny vondrona Eoropeanina vola. Lalankely mirefy 4,5 km no fantatra fa hamboarina ao amin’ity kaominina ity, ka fokontany 12 amin’ireo 13 isa misy no hahazo tombontsoa amin’izany, raha araka ny fanazavan’ny Ben’ny tanàna Rado Ramparaoelina. Tanjona amin’izany ny mba hahafahan’ny mponina rehetra mampirindra ny fiainany amin’ny andavanandro, indrindra fa mandritra ny fotoam-pahavaratra izay tena mampitaraina ny maro tokoa. Fa tsy latsa-danja amin’izany ny fanamboarana tsena. Raha ny fantatra dia ny kaominina roa ihany koa no hahazo tombony amin’izany toa an’Ampitatafika sy Alakamisy Fenoarivo samy ao anatin’ny distrikan’Antananarivo Atsimondrano ka izy ireo ihany no hanara-maso izany sy hijery izay mpiara-miasa mety aminy.